राज्य कहिलै जनताको हुन सकेन, सी'मा वि'वाद अन्तर्राष्ट्रियक'रण गर्ने कुरा गफैमा सीमित : डा. संग्रौला [ हर्नुहोस भिडियो सहित ] -
राज्य कहिलै जनताको हुन सकेन, सी’मा वि’वाद अन्तर्राष्ट्रियक’रण गर्ने कुरा गफैमा सीमित : डा. संग्रौला [ हर्नुहोस भिडियो सहित ]
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा युवराज संग्रौला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार मानिन्छन । समसामयिक विषमाय सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने गरेका डा संग्रौलाले नेपाल र भारतको सी’मा वि’वादको बारेमा आतबार बिहान फेसबुक मार्फत सुझाव प्रस्तु गरेका छन । उनले प्रस्तुत गरेको सुझाव देशहितमा रहेका छन ।
रास्ट्रहरुका बिचमा मु’द्दा वा वि’वाद आउंछन । तर, विवेक, तर्क र प्रमाणका आधारमा बहस निर्माण हुनुपर्छ। कालापानी नेपालको हो, र यस्मा आफ्नो दा’बी नेपालले छोडनु हुँदैन। तसर्थ, स’मस्याको समाधान गर्न नेपाली जनता र सरकार एक ठाउँमा उभिनु पर्छ। सहि बाटो समातेर संवादको बाटो समात्नु नै हाम्रो सहि र’णनी’ति हुनेछ।